‘वाह ! नेपाल एयरलाइन्स’ बनाउनु छ भने घाम तापेर बसेका ग्राउण्डेड विमानलाई दिनदिनै पुछ्न खटाउनुस् मन्त्रीज्यु ! « News24 : Premium News Channel
नवनियुतm मन्त्रीज्यु, नेपाल एयरलाइन्सलाई वाह भन्ने बनाउने हो भने कति समय लाग्छ होला ? तपाई भन्नुहोला– यत्रो बेथिती छ, २÷४ वर्ष त पक्कै लाग्छ । तर म भन्छु १ मिनेट मात्र लाग्छ, १ मिनेट । एउटा त्यस्तो एक मिनेट, जसमा तपाईले निर्णय गर्नुपर्यो कि म जतिसुकै ठुलो दबाव आएपनि नेपाल एयरलाइन्सलाई टाट पल्टाउनेहरुलाई निकालेरै छोड्नेछु । यो निर्णय र आँट गर्न १ मिनेटभन्दा बढी समय लाग्दैन र जुन दिन र जुन क्षण तपाईंले यो निर्णय गर्नुहुन्छ, बस् त्यही मिनेटबाट नेपाल एयरलाइन्स वाह भन्नलायक हुनेछ ।
दुई, हप्तामा ७ दिन, अर्थात् दैनिक एक उडान हुने दुबई गन्तव्य कटौती गरी हप्तामा ३ दिन मात्र राखिएको छ । त्यत्रो पैसा तिरेर ल्याइएको वाइडबढी जम्मा दिनमा ९ घण्टा मात्र उड्छ जबकि यसलाई १६ घण्टासम्म उडाउन सकिन्छ । बाँकी समय यो विमान घाम तापेर बसिरहेको हुन्छ । खोइ थपेको नयाँ गन्तव्य ?
तीन, हप्तामा १७ वटा उडान भएको दिल्लीको फ्लाइट, दशैँ–तिहारजस्तो सिजनमा बढाउनु पर्नेमा घटाएर १४ वटा बनाइँदै छ । कारण के होला त ?
चार, निगमसँग भएको एउटा ७५७ विमान मर्मतको लागि २०७५ कार्तिकमा मलेशिया गयो, ठुलो खर्चमा मर्मत भएर ८१ दिन पछि काठमाडौँ आयो । तर जनवरी १६ मा आएको विमानले आजसम्म एउटा पनि उडान गरेको छैन ।
पाँच, डोमेस्टिक अन्तर्गतका ७ वटा विमान ग्राउण्डेड छन् । छ, भविष्यका लागि कुनै पनि प्रशिक्षक पाइलट निर्माण गर्ने योजना नै छैन ।
र दश, वाइडबढी घोटाला । माननीय मन्त्रीज्यु, फ्राङक्ली भनौँ– यति ठूलो काण्डको पर्दाफास गर्न तपाईंले सक्नुहोला वा तपाईलाई गर्न देलान् भन्ने कुरामा विश्वास मान्न सकिनँ । बाँकी ९ वटा बुँदामा केही गर्नुभो भने चाहिँ तपाईलाई जोडदार सलाम गर्नेछाैँ । विस यु अन्ली द वेष्ट हनरेवल मिनिस्टर !